Sida lagu garto wararka been-abuurka ah ee siyaasadda | MPR News
Sida lagu garto wararka been-abuurka ah ee siyaasadda
Warar been ah ayaa lagu faafiyaa intarnetka iyadoo la adeegsanayo baraha bulshada, oo dadkuna iyaga oo aan ka warhayn ayey isla sii wadaagaan. Maaddaama ay soo dhowdahay doorashadii 2020, dad aqoon u leh ayaa nooga digaya sida aan isaga ilaalin karno wararka khiyaamada ah.
Doorashadii madaxweynaha ee 2016 waxaa in badan la isku dayey in dadweynaha la marin habaabiyo ama laga careysiiyo iyadoo la adeegsanayo ficillo warar been-abuur ah.
Halkan ka akhriso shan talo oo kugu caawinaya sida aad ku garaneyso iyo sida aad uga fogaaneyso wararka been-abuurka ah:
1. Tixgeli xigashada wararka
Waxaa jira warbaahin aad u badan iyo siyaabo badan oo wararka lagu heli karo oo aan weligeed la arkin. Arrintaas awgeed waxaa muhiim ah in la iska ogaado meelaha aad wararka ka heleyso iyo ujeedkooda.
Markaad intarnetka ka akhrisaneyso wararka, isku day inaad ogaato shaqaalahooda, waxyaabaha ay ka hadlaan, aragtidooda iyo sida ay maalgelinta ku helaan.
Marka aad iska hubineyso hal maqaal oo qoran, iska eeg qoraaga iyo xigashada raadraacyada warbixinta. Dad fikradahooda qora, oo aan ahayn wariyeyaal, ayaa aad u soo badanaaya iyaga oo fikradahooda ka dhigaya wax xaqiiqa ah.
Intaas waxaa sii dheer, dad kale oo wax qora ayaaba isticmaala warbixin aysan lahayn oo ay sheegtaan. Arrintaas ayaa wararka ka dhigeysa wax lagu jaha-wareero oo aan sax ahayn.
2. Ka faa'iideyso intarnetka
Haddii aad aragto warar aan faahfaahin lahayn, waxay u badan tahay in ay dad kale sidaas kuula arkeen. Ka baar intarnetka ama booqo shabakadaha xaqiiqa-raadiska ee sida Snopes ama Politifact si aad uga eegto haddii uu jiro qof kale oo soo hubiyey su'aasha aad qabto.
3. Iska hubso in uu warku yahay mid hadda socda
Iska hubso taariikhda la daabacay wax kasta oo aad akhrisato. Haddii aysan qorneyn taariikhdii la daabacay, warkaas oo dhan waa wax uu shaki ku jiro. Anshaxa saxaafadda waxaa ka mid ah in ay jirto daahfurnaan muujineysa mar kasta oo la gudbiyo maqaal iyo mar kasta oo wax laga beddelo.
Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira shabakado intarnetka ah oo ay far ku mudan tahay oo badanaa dib u qora warar hore oo wakhtigoodii la soo dhaafay iyaga oo aan sheegeyn markii ugu horreysay ee uu warku soo ifbaxay.
4. Haddii uu masawir ama fiidiyow kuula muuqdo wax aan jirin, waxay u badan tahay wax been-abuur ah
Adigu caqligaaga isticmaal. Haddii uu masawir u muuqdo wax aan macquul ahayn iyo been, sidaad adigu uga yaabto ayey u badan tahay runtu.
Badanaaba masawirrada beenta ah waa kuwa sax ah oo meelo laga soo xigto balse wax baa laga soo beddelay. Hal dariiq oo lagu ogaan karo waa iyadoo laga baaro kuwa la mid ah oo ku jira Google Images. Eeg bogga Google Images oo guji muuqaalka kaamaradda si aad u geliso masawirka ama ku dheji cinwaanka intarnetka ee masawirka. Inkasta oo uu khalad dhici karo, natiijooyinka kuu soo baxa ayaad ka heleysaa fikrad meesha uu asalkii masawirku ka yimid iyo sidii saxda ah ee loo isticmaalay.
5. Iska hubso haddii uu warku meelo kale ku jiro
Haddii aadan isla warkaas ka heli karin meelo badan, waxay u badan tahay in uusan run ahayn. Inkastoo ay kala duwan yihiin meelaha la rumeysan karo, haddana wararku waxay u badan yihiin in ay run yihiin marka ay weriyeyaal badan si isku mid ah u sheegaan.
Su'aal ma ka qabtaa wax ku saabsan doorashada 2020? Noogu soo dir ask@mpr.org